Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku baxay xaalad is mari-waa ka taagan Dekeda Muqdisho + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku baxay xaalad is mari-waa ka taagan Dekeda Muqdisho + Sawirro
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta fara geliyay xaalad is mari waa ah oo ka taagan Dekeda Muqdisho, taasoo u dhaxeysa Ganacsatada iyo Maamulka Dekeda Muqdisho oo dhinac ah iyo Shirkadda Albeyrak.
Ganacsatada wax kala soo dega Dekeda Muqdisho ayaa dhowaan cabasho u gudbiyay Ra’iisul Wasaaraha, iyagoo ka codsaday inuu soo fara geliyo xaalad jahwareer ah oo ka jirta Dekeda Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa maamulka dekadda kala hadlay sidii loo dar-dargelin lahaa shaqada, loona horumarin lahaa dekedda Muqdisho, sidoo kalena waxuu la sheekeestey Ganacsatada alaabta kala soo dageysey dekadda, isagoo ka wareystey sida loola dhaqmo marka ay usoo degayaan badeecooyinka.
Waxaa uu maamulka dekadda ugu baaqey iney ilaaliyaa xariirka Ganacsatada, loona fududeeyo sidii ay ganacsigooda hab nidaam ah u mari lahaa.
“Waa iney helaan Ganacsatada Soomaaliyeed qadarin gooniya si loo dareensiiyo iney dalkan iyagu leeyihiin, taasina waxaa keeni karta iyadoo loo fududeeyo Ganacsigooda”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Shirkadda gacanta ku heysa Dekeda Muqdisho ayaa lagu eedeeyay in aanay tixgelin siin Ganacsatada wax kala soo degeysa garoonka, isla markaana waxa kaliya ee dekeda yaala ay yihiin dhowr wiish oo konteenarada looga dejiyo maraakiibta, kuwaasoo mararka qaar cilado ku timaadaan.
Sidoo kale Ganacstada ayaa qaati ka taagan lacago fara badan oo dhowr meel looga qaado, marka ay alaabaha kala soo degaan dekeda Muqdisho.
Kormeerka Ra’iisul Wasaaraha ku tagay Dekeda Muqdisho ayaa noqonaya markii shanaad, waxaana uu maamulka iyo shaqaalaha kula dardaarmey iney nidaam caddaalad ah ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed, isla markaana ay iska ilaaliyaan wax walba oo keeni kara musuq-maasuq.
The post Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku baxay xaalad is mari-waa ka taagan Dekeda Muqdisho + Sawirro appeared first on Ilwareed Online.
Puntland : Midnimo ku xiran Sadbursi ama ku Goodin Go’id